Ahoana no hahatonga ny vehivavy ho tia anao ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ahoana no hahatonga ny vehivavy ho tia anao. Voalaza fa anisan’ny fotoana mahafaly indrindra eo amin’ny fiainantsika ny toetry ny firaiketam-po. Tena sarotra ny raiki-pitia amin'ny vehivavy, ary mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy esorinao ny fiadianao rehetra. Saingy mety ho laviny koa ianao, ary mba hisorohana izany tsy hitranga, dia namorona ity lahatsoratra ity izahay miaraka amin'ny toro-hevitra fototra ho an'ny vehivavy nofinofinao hahita ny antsasany tsara kokoa. Mirary anao ho tsara vintana!
1 Ahoana no hahatonga ny vehivavy ho tia anao tsikelikely
1.1 1. Henoy izany
1.2 2. Aoka ianao ho malemy fanahy
1.3 3. Miakanjo tsara mba hahatonga ny vehivavy ho tia anao
1.4 4. Aza mirehareha
1.5 5. Aza atao tsinontsinona izany
1.6 6. Antsoy izy aorian'ny fiarahana voalohany mba hahatonga azy ho tia anao
1.7 7. Mandehana miadana
1.8 8. Aoka ho tsara fanahy amin'ny namanao
1.9 9. Tariho ny fifandraisanao
1.10 10. Aoka ianao ho romantika sao misy vehivavy raiki-pitia aminao
1.11 11. Ampahafantaro ny fianakavianao izany
Ahoana no hahatonga ny vehivavy ho tia anao tsikelikely
Tsy misy vehivavy mitovy amin’ny hafa, ka izany no mahatonga ny lehilahy maro hatahotra rehefa mangataka sipa. Tsy hainy ny manao fihetsika, sao tian’ity vehivavy ity izany ary heveriny fa tsy ho vitany izany.
Manaraka izany dia hanome anao toro-hevitra fototra izay hanampy anao hahatratra ny tanjonao mahazo vehivavy ho tia anao.
1. Henoy izany
Ny vehivavy rehetra dia tia miresaka sy henoina. Amin'ny fiarahana voalohany dia afaka miresaka lohahevitra tsy tambo isaina ianao, ary raha tianao ny hahatonga azy hahatsapa ho miavaka dia tandremo izay rehetra lazainy aminao ary miresaha aminy. Fanombohana tsara izany ary hampifandray anao amin'ny fifanakalozana hevitra.
2. Aoka ianao ho malemy fanahy
Raha miresaka momba ny maha gentleman isika dia tsy midika izany fa tokony ho prince charme ianao. Mba ho olo-manan-kaja tokony ho anaomanaova amin'ny fomba fahalalam-pomba, malemy fanahy, ary miahy. Ohatra, sokafy ny varavaran'ny trano fisakafoanana na ny fiara handehanana ary aza mampiasa teny na fitenenana manozona mandritra ny daty. Ary koa, aza mieritreritra ny hanao firaisana ara-nofo fa tsy amin'ny toerany izy ireo ary hamorona tontolo mihenjana. Efa mifankahalala ianareo fa tsy mpivady.
3. Miakanjo tsara mba hahatonga ny vehivavy ho tia anao
Tsy misy vehivavy hihevitra fa ilay lehilahy eo amin'ny fiainany dia karazana manao akanjo maloto sy maimbo. Lehilahy voaharatra na manana volombava voadio tsara, manitra, madio volo ary ny akanjo misongadina amin'ny fahamendrehany dia antsipiriany izay mahazo fomba fijery maro avy amin'ny vehivavy tianao.
4. Aza mirehareha
Misy lehilahy tia mampideradera ny asany na ny fananany ara-nofo, nefa izao Tsy zavatra tokony hataonao eo anatrehan'ilay vehivavy kasainao horesena izany. Tsy tiany koa ny hiresaka momba ny zavatra tsy anananao, satria na izany na tsy izany dia tsy ho afaka hampiaiky volana azy ianao.
5. Aza atao tsinontsinona izany
Raha nahita ilay vehivavy tonga lafatra ianao ary tianao ho tia anao izy, tokony hampidirinao amin'ny resaka miaraka amin'ny namanao izany. Miezaha miresaka momba ny lohahevitra mahaliana azy koa, ary avelao izy hilaza ny heviny. Ny firesahana momba ny fiara, ny baolina kitra, ary ny vehivavy hafa dia tsy azo antoka. Ataovy azo antoka fa hain'ny namanao ihany koa ny fomba hitazonana ny fahatoniana sy hanana lohahevitra samihafa horesahina.
6. Antsoy izy aorian'ny fiarahana voalohany mba hahatonga azy ho tia anao
Raha miantso azy ianao ny andro aorian'ny fiarahanao voalohany, mitombo be dia be ny mety hahatonga azy ho tia anao. Aza milalao ny fanelingelenana fa tsy misy ilana azy. Ny hany tsy maintsy ataonao dia ny miantso azy hijery ny toetrany, lazao azy fa tianao ny hihaona aminy ary te hahita azy indray ianao. Raha tena te hahafantatra anao bebe kokoa izy, dia hanaiky ilay fanasana. Aza manafotra azy mandra-pahatongan'ny daty faharoa miaraka amin'ny hafatra an'arivony amin'ny telefaona, tambajotra sosialy na mailaka.
7. Mandehana miadana
Ny ankamaroan'ny lehilahy dia manantena fa aorian'ny fiarahana voalohany dia hisy zavatra akaiky kokoa hitranga. Ny fifandraisana akaiky kokoa anefa dia mitaky fotoana, fanajana, andraikitra ary fanoloran-tena. Hajao izy ambonin’ny zavatra rehetra. Ny lehilahy iray izay mandray izany dia manaja ny fanapahan-kevitra sy ny fotoana atolotry ny hafa.
8. Aoka ho tsara fanahy amin'ny namanao
Ny fahafantarana ny manodidina ny namanao dia saika fombafomba, ary eo no hahazoanao fankatoavana na tsy fankasitrahana avy amin'izy ireo. Tena zava-dehibe aminy izany, koa aoka ianao ho mahalala fomba sy sariaka. Miresaha amin'izy ireo tsy misy tahotra ny ho tena maha-izy anao. Amin'ny farany, ny mangarahara araka izay azo atao dia zavatra tsara ho anao.
9. Tariho ny fifandraisanao
Rehefa manapa-kevitra ny hiaraka amin'ny vehivavy ianao, Tsy maintsy mazava tsara ny zavatra andrasanao amin'ny fifandraisana. Raha tsy mahita hoavy miaraka aminy ianao dia tapaho ny fiarahanao, fa aza miaraka aminy noho ny fanaintainana na ny fampiononana. Raha tianao kosa ny ho anao mandrakizay dia manambady. Mora izany. Tian'ny vehivavy ny mahafantatra ny toerana alehany.
10. Aoka ianao ho romantika sao misy vehivavy raiki-pitia aminao
Ny hoe romantika dia tsy hoe cheesy. Romanticism dia fifangaroan'ny fihetsika mahery, toy ny fandoavana ny faktioran'ny trano fisakafoanana, miaraka amin'ny tsy ampoizina kely izay mety manomboka amin'ny fanomezana voninkazo azy tsy misy antony hampahafantatra azy amin'ny hafa ho sipanao (raha tena izy).
11. Ampahafantaro ny fianakavianao izany
Ny fampidirana ilay vehivavy tianao amin'ny fianakavianao dia toy ny famehezana fifamatorana. Koa raha matoky ianao fa izy no vehivavy eo amin’ny fiainanao dia mandehana. Tsy ilaina ny manomana sakafo antoandro na sakafo hariva ho an'ny rehetra mba hifankahalalana. ihany mitafy azy ho mpiara-miasa aminao amin'ny fihaonan'ny fianakaviana na lanonana. Milamina kokoa izany ary tsy hatahotra ny hihaona amin'ny olona rehetra ianao. Nefa tadidio ny tsy hamela azy irery na oviana na oviana.
Raha te hahomby ianao ary hahatonga ny vehivavy ho tia anao, mampivelatra fomba maha-olona izay ahitana ireo toetra rehetra ireo amin'ny toetranao. Manome toky anao izahay fa ny vehivavy nofinofinao dia tsy hahatohitra ny fiarahana aminao ary, antenaina, ho eo anilanao rehetra.
Raha te hanohy hampitombo ny fahalalanao ianao dia tsidiho ny lahatsoratra sisa amin'ny discover.online
Ahoana no hamerenana ny fisakaizana tapaka
Ahoana no ho hendry kokoa
ENTANA NOVOKARINA To learn MAIMA VE Very lanja | FAHASALAMANA zava-pisotro Malagasy FAHASALAMANA Ahoana no Dios isan-karazany farany andian-teny angano Matematika Ny nofiko vavaka Popular Santos No Category nofy hantsaka Tarot WhatsApp